စတိုင်နံပါတ် .: GXX-2 အရောင် - အနီရောင်အရွယ်အစား: 2-8A အထည်: ၁၀၀% polyester ချည်ထည်သည်နှစ်ဖက်စလုံးကိုနှစ်ဖက်စလုံးကိုပျော့ပျောင်းသောလက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်သည်။
စတိုင်နံပါတ်: XN-192200 အရောင်: မီးခိုးရောင်မဲမဲလန်းမဲအရွယ်အစား: 4-12A အထည်: 72% polyester 21% viscose 7% spandex ချည်ထိုးထည်, ၃၀၀ gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Elastic, Rhinestone, Fur ball မှတ်ချက်များ: သံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော rhinestone
Style No .: 20Z-11 အရောင်: မီးခိုးရောင်မဲရင့်ရောင်အရွယ်အစားအရွယ်အစား - ၄-၁၂A အထည် - နောက်ဖက်တွင် 100% polyester သိုးမွေး၊ 380gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: elastic, Rhinestone မှတ်ချက်။
စတိုင်နံပါတ် .: 20Z-05 အရောင်: မီးခိုးရောင်မဲရင့်ရောင်အရွယ်အစားအရွယ်အစား - ၄-၁၂A အထည် - နောက်ဖက်တွင် 100% polyester သိုးမွေး၊
မိန်းကလေး ၀ တ်ထားသည့် FH-110 ဂျာကင်အင်္ကျီ
စတိုင်နံပါတ်: FH-110 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: ၁၀၀% polyester ပုံနှိပ်ပြီး 50D ယက်ထည်; အရှည်: 210T taffeta; ဖြည့်စွက်: လက်ဖြင့်ပိုးထည်ကဲ့သို့သောတွဲဖက်ပစ္စည်းဆက်စပ်ပစ္စည်း: elastic bining၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်မှတ်ချက်များ: ပုံနှိပ်အားလုံး
မိန်းကလေး ၀ တ်ထားသောအကျီ (ရှည်လျားသောပုံစံ) FH-108
စတိုင်နံပါတ် .: FH-108 အရောင်: ပန်းရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: အခွံ: ၁၀၀% polyester ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ 50D ရက်ထည်; ခန္ဓာကိုယ် / ပါးပျဉ်းနံရံ: Bejirog သားမွေး; လက်နံရံ - 210T taffeta; ပါးပျဉ်းအဖွင့်: ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ရောင်စုံရှည်လျားသားမွေး; ဖြည့်စွက်ခြင်း - လက်ပုံစံဖြင့်ပိုးထည်အပိုဆောင်းဆက်စပ်ပစ္စည်း: Snap ခလုပ်၊ နိုင်လွန်ဇစ်၊ ပလပ်စတစ်ဇစ်မှတ်ချက် - လိပ်ပြာတစ်လုံးလုံးပုံနှိပ်ခြင်း၊ အိတ်ကပ်ရှိဇီပါကာပေါ်ရှိဘောလုံးဘောလုံး ny နိုင်လွန်ဇစ်နှင့်ဖြုတ်နိုင်သောပါးပျဉ်း
မိန်းကလေး ၀ တ်ထားသည့်အကျီ (ရှည်လျားသောပုံစံ) FH-107
စတိုင်နံပါတ် .: FH-107 အရောင်: ပန်းရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester 75D ရက်ထည်; ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပါးပျဉ်းနံရံ - Bejirog သားမွေး၊ လက်အရှည် - 210T taffeta; ပါးပျဉ်းအဖွင့်: ဖြုတ်တပ်နိုင်သော2အရောင်များကိုသားမွေး; ဖြည့်စွက်ခြင်း - ပိုးထည်ဖြင့်ပြုလုပ်သောလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဆက်စပ်ပစ္စည်း: ပွင့်လင်းမြင်သာသောခလုတ်၊ elastic tape၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်အင်္ဂါရပ်များ: နှလုံးပုံစံစောင်၊ ပါးပျဉ်း၌အရောင်နှစ်မျိုးဖြင့်အမွေးရှည်၊ sequin ပန်းထိုးထားသည့်သားမွေးအိတ်ကပ်မှတ်ချက်များ။ Sequin ပန်းထိုးခြင်း၊ Flat- ဇာထိုးနံရိုး
မိန်းကလေး ၀ တ်ထားသောအကျီ (ရှည်လျားသောပုံစံ) FH-83A
စတိုင်နံပါတ် .: FH-83A အရောင်: မီးခိုးရောင်မှောင်မိုက်အရွယ်အစား: 6-16A အထည်: Shell: 100% polyester ပုံနှိပ်ထားသောနန်းကြိုးအမျှင်လေး; အရှည်: 210T taffeta; ဖြည့်စွက်ခြင်း - လက်ပုံစံဖြင့်ပိုးထည်ပစ္စည်းဆက်စပ်ပစ္စည်း - ဆက်စပ်ပစ္စည်း: သတ္တုအဆို့၊ နိုင်လွန်ဇစ်၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်သွင်ပြင် - အခွံအထည်ပေါ်ရှိလိပ်ပြာရွှေသတ္တုပါးပုံနှိပ်ခြင်း၊ နောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းအနောက်ဘက်အစွန်ခံမှတ်ချက်မှတ်ချက်များ: ရွှေသတ္တုပါးပုံနှိပ်ခြင်း၊
မိန်းကလေး ၀ တ်ထားသည့်အကျီ FH-58
စတိုင်နံပါတ် .: FH-58 အရောင်: ပန်းရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester ရက်ထည်; ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်လက်တန်းနံရံ - Poly ယက်ထည်၊ ပါးပျဉ်းနံရံ: Poly ယက်ထည်; ဖြည့်စွက်ခြင်း: လက်ဖြင့်ပိုးထည်ကဲ့သို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းဆက်စပ်ပစ္စည်း: elastic binding, ပလတ်စတစ်ဇစ်အင်္ဂါရပ်: ခန္ဓာကိုယ် / လက် - ချုပ်ချုပ်ချုပ်ခြင်းမရှိဘဲ shell နှင့် linining အထည်ပေါ်ပန်းထိုးမှတ်ချက်မှတ်ချက် - All-over ပန်းထိုး
မိန်းကလေး ၀ တ်ထားသောအကျီ (ရှည်လျားသောပုံစံ) FH20-056
စတိုင်နံပါတ် .: FH20-056 အရောင်: အဖြူရောင်ပြင်ပအရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ 100% polyester ပုံနှိပ်ယက်ထည် + poly chiffon; ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပါးပျဉ်းနံရံ - Bejirog သားမွေး၊ လက်အရှည် - 210T taffeta; ပါးပျဉ်းအဖွင့်: ဖြုတ်တပ်နိုင်သော2အရောင်များကိုသားမွေး; ဖြည့်စွက်ခြင်း - ပိုးထည်ထိုးခြင်းလက်ဖြင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ဆက်စပ်ပစ္စည်း - elastic ကြိုး၊ မျက်လုံး၊ snap ခလုတ်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသောခလုတ်၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်အင်္ကျီ - ပါးပျဉ်းပေါ်အရောင်နှစ်မျိုးဖြင့်အမွေးရှည်၊ အက္ခရာသုံးလုံးပါသည့်အခွံအထည် ၃ လွှာ၊ အမွေးပါသောအိတ်ကပ်ခတ် : All-over PR ...
မိန်းကလေး ၀ တ်ထားသောအကျီ (ရှည်လျားသောပုံစံ) FH20-055
စတိုင်နံပါတ် .: FH20-055 အရောင်: ပန်းရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: အကျီ: မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် 100% polyester ပုံနှိပ်ယက်ထည် + poly chiffon; ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပါးပျဉ်းနံရံ - Bejirog သားမွေး၊ လက်အရှည် - 210T taffeta; ပါးပျဉ်းအဖွင့်: ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ရောင်စုံရှည်လျားသားမွေး; ဖြည့်စွက်ခြင်း: လက်ဖြင့်ပိုးထည်ထိုးသည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဆက်စပ်ပစ္စည်း: Elastic တိပ်၊ Snap ခလုတ်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသောခလုတ်၊ Metal zipper အသားအရေပေါ်ရှိအရောင် ၂ ခုဖြင့်အမွေးရှည်ရှည်၊ အက္ခရာအားလုံးခြယ်ထားသည့်အခွံသုံးလွှာ၊ အမွေးပါသည့်အိတ်ကပ်ခတ်မှတ်ချက် - အားလုံး ပုံနှိပ် -over, All- ကျော် emb ...
မိန်းကလေး ၀ တ်ထားသောအကျီ (ရှည်လျားသောပုံစံ) FH20-022
စတိုင်နံပါတ် .: FH20-022 အရောင်: ပန်းရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: Shell: 100% polyester ထွန်းလင်းယက်ထည် + Sherpa; ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်လက်ကြောနံရံ - 210T taffeta, hood နံရံ - အ ၀ တ်အထည်ကဲ့သို့ထည်ထည်ထည်ထည်၊ ပါးပျဉ်းအဖွင့်: ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ရောင်စုံရှည်လျားသားမွေး; ဖြည့်စွက်ခြင်း - လက်ဖြင့်ပိုးထည်ကဲ့သို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းဆက်စပ်ပစ္စည်း: Elastic ကြိုး၊ မျက်ခုံး၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသောခလုတ်၊ Snap ခလုတ်၊ နိုင်လွန်ဇစ်၊ သတ္တုဇစ်အင်္ဂါရပ်။ အပေါ်နှင့်အောက်ခန္ဓာကိုယ်ရှိ Sherpa panel မှတ်ချက်။ ။ ။